Mogadishu Journal » Jubbaland oo ku guuleysatay Tartanka Cayaaraha Maamul gobolleedyada
Mjournal :- Kooxda Jubbaland ayaa galabta ku guuleysatay Tartanka maamul goboleedyada dalka, kadib markii ay 1-0 uga adkaatay kooxda Puntland.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Reaysal wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre , Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha marwo Khadiijo,guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Mudane C/qani , Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Taabit Cabdi iyo xubno kale.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu nastay 0-0, xilli labada kooxood ay iska lumiyeen fursado wanaagsan oo goolal loo filan karay.
Markii dib la isugu soo laabtay ayaa Jubbaland waxaa u suura gashay in ay hesho goolki guusha,waxaana shabaqa gaaray kabtankooda Yoonis iyadoo ciyaarta kusoo dhamaatay 1-0.
Magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG Jubbaland ayaa waxaa ka socda Munaasabado loogu dabaal degayo guusha ay gaartay kooxda Jubbaland .
Sida loogu kala guuleystay Abaal-Marinada Taratnka
Macallinka ugu fiican Tartanka waa Khaliiji oo leyliya Jubbaland.
Gool dhallinta tartanka waxaa ku guuleystay Muuse C/raxiim oo ka tirsan Jubbaland.
Xiddigii ugu fiicnaa tartanka waxaa ku guuleystay kabtanka Puntland C/laahi Akram.
Goolhayihii ugu fiicnaa tartanka waa Cabaas Bashiir oo ka tirsan Gobolka Banaadir.